Tena vita izany - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-01 > Tena tanteraka izany
Nanao teny mampianatra momba ny Soratra Masina i Jesosy tamin’ireo mpitarika jiosy izay nanenjika azy: “Ny Soratra Masina no manondro Ahy.” (Jaona. 5,39 Fandikan-teny Genève Vaovao). Taona maro taty aoriana, io fahamarinana io dia nohamafisin’ny anjelin’ny Tompo tamin’ny fanambarana iray manao hoe: “Fa ny faminanian’ny Fanahin’Andriamanitra dia ny hafatr’i Jesosy.” ( Apokalypsy 1 Kor.9,10 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Mampalahelo fa ireo mpitondra jiosy dia tsy niraharaha ny fahamarinan'ny Soratra Masina sy ny maha-an'i Jesosy ho Zanak'Andriamanitra. Fa kosa, ireo fombafomba ara-pivavahana amin'ny tempolin'i Jerosalema dia nifantohan'ny mahaliana azy ireo satria nanome tombony ho azy ireo manokana. Ka dia nanjary tsy nahita an'Andriamanitry ny Isiraely izy ireo ka tsy nahita ny fahatanterahan'ny faminaniana tao amin'ilay olona sy amin'ny fanompoana an'i Jesosy, ilay Mesia nampanantenaina.
Tena tsara tarehy ny tempolin'i Jerosalema. Ny mpahay tantara sy ny manam-pahaizana jiosy Flavius ​​Josephus nanoratra hoe: «Ny fehiloha marbra fotsy mamirapiratra dia voaravaka volamena sy mahafinaritra fatratra. Ren'izy ireo ny faminanian'i Jesosy fa ho fongana tanteraka io tempoly tsara tarehy io, izay ivon'ny fiankohofana eo ambanin'ny fanekena taloha. Fandringanana izay manao sonia ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra dia tanterahana amin'ny fotoana mety tsy misy an'io tempoly io. Inona no nahagaga sy tena nahagaga ny olona?
Mazava ho azy fa tsy dia talanjona loatra tamin’ny tempoly tao Jerosalema i Jesosy noho ny antony tsara. Fantany fa ny voninahitr’Andriamanitra dia tsy azo ihodivirana na inona na inona trano nataon’olombelona, ​​na dia lehibe toy inona aza izany. Nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy fa hosoloina ny tempoly. Tsy nahatanteraka ny tanjona nanorenana azy intsony ny tempoly. Nanazava toy izao i Jesosy: “Tsy milaza va ny Soratra Masina hoe: Ny tranoko dia tokony ho trano fivavahana ho an’ny firenena rehetra? Fa ianareo kosa nanao zohy fieren’ny jiolahy teo » (Mar 11,17 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Vakio koa izay taterin’ny Filazantsaran’i Matio momba izany: «Nivoaka ny tempoly Jesosy ka efa handeha. Dia nanatona Azy ny mpianany ka nampahafantatra Azy ny hakanton’ny tempoly. Manaitra anao izany rehetra izany, sa tsy izany? hoy Jesosy. Lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy hisy vato hijanona eo an-daniny; ho rava ny zavatra rehetra » (Matio 24,1—2, Lioka 21,6 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Nisy tranga roa nanombanan'i Jesosy ny fandravana an'i Jerosalema sy ny tempoly. Ny hetsika voalohany dia ny fidirany tamim-pandresena tao Jerosalema, izay nametrahan'ny olona ny lambany teo amin'ny tany teo anoloany. Fihetsika fanompoam-pivavahana ho an'ny olona ambony izy io.
Mariho izay notaterin’i Lioka: “Ary nony mby akaiky ny tanàna Jesosy, ka nahita azy nandry teo anoloany, dia nitomany azy Izy ka nanao hoe: Raha mba ho fantatrao anio izay hitondra fiadanana ho anao! Fa ankehitriny miafina aminao izany ka tsy hitanao. Ho avy ny andro ho anao, izay hananganan'ny fahavalonao manda manodidina anao, hanao fahirano anao sy hanenjika anao amin'ny lafiny rehetra. Dia handringana anareo sy hanorotoro ny zanakareo izay mitoetra ao anatinareo, ary tsy havelany havela hisy vato eran’ny tanàna, satria tsy fantatrareo ny andro nihaonan’Andriamanitra taminareo » (Lioka 1.9,41-44 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Ny fisehoana faharoa, izay naminanian'i Jesosy ny fandringanana an'i Jerosalema dia nitranga fony i Jesosy nitarika ny tanàna nankany amin'ilay toerana nanomboana azy. Vahoaka feno olona tao an-dalambe, na ny fahavalony ary ireo mpanara-dia nitory azy. Naminany i Jesosy izay hitranga amin'ny tanàna sy ny tempoly ary izay hitranga amin'ny vahoaka vokatry ny fandringanana ny Romana.
Azafady, vakio ny tatitra nataon’i Lioka: “Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka an’i Jesosy, anisan’izany ny vehivavy maro izay nitaraina mafy sy nitomany Azy. Fa Jesosy nitodika taminy ka nanao hoe: Ry vehivavy Jerosalema, aza mitomany Ahy; Mitomania ny tenanao sy ny zanakao! Fa ho avy ny andro hilazany hoe: Sambatra ny vehivavy tsy manan-janaka ka tsy niteraka! Dia hiteny amin'ny tendrombohitra izy ireo hoe: Mianjerà aminay! Ary amin'ny havoana: aleveno izahay! (Lioka 23,27-30 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Fantatsika avy amin'ny tantara fa tanteraka ny faminanian'i Jesosy tokony ho 40 taona taorian'ny nanambarana azy. Tamin'ny taona 66 AD dia nisy fikomiana jiosy nanohitra ny Romana ary tamin'ny taona 70 AD dia rava ny tempoly, rava ny ankamaroan'i Jerosalema ary nijaly mafy ny olona. Nitranga ny zava-drehetra araka ny nambaran'i Jesosy tamim-pahatsorana.
Rehefa niantsoantso teo amin’ny hazo fijaliana i Jesosy hoe: “Vita”, dia tsy ny fahavitan’ny asa fanavotana nataony ihany no tian’i Jesosy holazaina, fa nambarany koa fa ny fanekena taloha (ny fomba fiainan’ny Isiraely sy ny fanompoam-pivavahana araka ny lalàn’i Mosesy) ny fikasana nomen’Andriamanitra azy dia tanteraka. Tamin’ny fahafatesan’i Jesosy, ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty, ny niakarany tany an-danitra ary ny nanirahana ny Fanahy Masina, dia vitan’Andriamanitra tao amin’i Kristy sy tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina ny asa fampihavanana ny olombelona rehetra amin’ny tenany. Izao no nambaran’i Jeremia mpaminany mialoha hoe: “Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hanaovako fanekena vaovao amin’ny taranak’Isiraely sy ny taranak’i Joda, fa tsy tahaka ny fanekena nataoko tamin’ny razany. , fony Aho nandray ny tànany hitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, dia nanao fanekena izay tsy notandremany, na dia Izaho aza no tompony, hoy Jehovah; fa izao no fanekempihavanana izay hataoko amin’ny taranak’Isiraely rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Hataoko ao am-pony ny lalàko sy hosoratako ao an-tsainy, ary izy ho oloko, ary Izaho ho Andriamaniny. . Ary na ny rahalahy iray dia tsy hampianatra ny namany ka hanao hoe: Fantaro ny Tompo, fa samy hahafantatra Ahy avokoa izy rehetra, na kely na lehibe, hoy Jehovah; fa havelako ny helony ary tsy hotsarovako mandrakizay ny fahotany” (Jeremia 31,31- iray).
Miaraka amin'ny teny hoe "Vita" dia nanambara ny vaovao tsara i Jesosy momba ny fananganana ny fanekena vaovao. Lasa ny taloha, lasa ny vaovao lasa. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ny ota ary tonga teto amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny fanavotana fanavotana nataon'i Kristy, izay nahafahan'ny asa lalina ny Fanahy Masina manavao ny fontsika sy ny saintsika. Ity fanovana ity dia mamela antsika handray anjara amin'ny toetran'ny olombelona nohavaozin'i Jesosy Kristy. Izay nampanantenaina sy naseho teo ambanin'ny fanekem-pihavanana taloha dia notanterahina tamin'ny alalan'i Kristy tao amin'ny fanekena vaovao.
Araka ny nampianarin’ny apostoly Paoly, dia azon’i Kristy (ilay Fanekem-pihavanana Vaovao) ho antsika izay tsy azon’ny lalàn’i Mosesy (ny fanekena taloha) hatao sy tsy tokony hataony. “Inona no fehin-kevitra tokony horaisintsika amin’izany? Nambaran’Andriamanitra fa marina ny olona tsy anisan’ny Jiosy, nefa tsy niezaka nanao izany. Nahazo fahamarinana miorina amin’ny finoana izy ireo. I Israely kosa, amin’ny ezaka rehetra ataony amin’ny fanatanterahana ny lalàna sy amin’izay hahazoana ny rariny, dia tsy nahatratra ny tanjona tian’ny lalàna. Fa nahoana no tsy? Fa ny fototra izay nanorenana azy dia tsy finoana; nahatsapa izy ireo fa afaka manatratra ny tanjona amin'ny alalan'ny zava-bitany manokana. Ny vato misakana natrehin’izy ireo dia “ilay vato mahatafintohina” (Romana 9,30-32 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Ny Fariseo tamin'ny andron'i Jesosy sy ireo mpino izay avy tamin'ny fivavahana jiosy dia nitaona ny avonavona sy ny fahotana tamin'ny alàlan'ny fihetsika ara-dalàna tamin'ny andron'ny Apôstôly Paul. Nihevitra izy ireo fa amin'ny fiezahana ara-pivavahany dia afaka mahazo izay tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery amin'ny fahasoavana, amin'ny alalàn'i Jesosy no afaka manao ho antsika. Ny fomba fanaovan'izy ireo taloha (miasa marina) dia fahalovana nateraky ny herin'ny ota. Azo antoka fa tsy nisy tsy fahampian'ny fahasoavana sy ny finoana ny fanekena taloha, fa araka ny efa fantatr'Andriamanitra, ny Isiraely dia hiala amin'ny fahasoavana.
Izany no antony nanaovana ny fanekem-pihavanana vaovao hatrany am-piandohana ho fahatanterahan'ny fanekena taloha. Fahatanterahany notanterahina tao amin'i Jesosy sy tamin'ny ministerany ary tamin'ny Fanahy Masina. Namonjy ny olombelona tamin'ny avonavona sy ny herin'ny ota izy ary namorona lalindalina vaovao amin'ny fifandraisana amin'ny olona rehetra eran-tany. Fifandraisana mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay eo anatrehan'Andriamanitra Triune.
Mba hampisehoana ny maha-zava-dehibe ny zava-nitranga tamin'ny hazo fijalian'i Kalvary, fotoana fohy taorian'ny niantsoan'i Jesosy hoe "Vita", dia nihorohoro ny tanàna tao Jerosalema. Niova fototra ny fisian'olombelona ary nitarika ny fahatanterahan'ny faminaniana momba ny fandringanana an'i Jerosalema sy ny tempoly ary koa ny fananganana ny fanekena vaovao:
Ny efitra lamba teo amin'ny tempoly, izay nanakana ny fidirana amin'ny Sakramenta Masina, dia triatra roa avy ambony ka hatrany ambany.
Nisokatra ny grave. Nisy olo-masina maro maty natsangana.
Ireo mpijery dia nahafantatra an'i Jesosy ho Zanak'Andriamanitra.
Ny fanekena taloha dia nanao lalana ho an'ny fanekena vaovao.
Rehefa niantsoantso ireo teny hoe "Vita" dia nanambara ny fiafaran'ny fisian'Andriamanitra ao amin'ny tempoly nataon'olona iray izy, ao amin'ny "Masina Masina". Tao anatin'ny taratasiny ho an'ny Korintiana dia nanoratra i Paoly fa mipetraka ao amin'ny tempoly tsy vatana ara-batana Andriamanitra ankehitriny, noforonin'ny Fanahy Masina:
«Tsy fantatrareo va fa tempolin’Andriamanitra hianareo, ary ny Fanahin’Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Izay mandrava ny tempolin'Andriamanitra dia manimba ny tenany, satria mihatra aminy ny fitsaran'Andriamanitra. Fa masina ny tempolin’Andriamanitra, ary ianareo no ity tempoly masina ity » (1 Kor. 3,16-17, 2. Korintiana 6,16 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Hoy ny apostoly Paoly: “Mankanesa any aminy! Izy no ilay vato velona izay nambaran’ny olona ho tsy misy ilana azy, fa Andriamanitra mihitsy no nifidy ary tena sarobidy eo imasony. Aoka ianao hampidirina toy ny vato velona ao amin'ny trano izay nataon'Andriamanitra sady feno ny Fanahiny. Aoka haorina ho fisoronana masina ny tenanao mba hahafahanao manolotra sorona amin’Andriamanitra noho ny asan’ny Fanahiny – sorona ankafiziny satria miorina amin’ny asan’i Jesosy Kristy izany. “Fa ianareo no vahoaka nofidin’Andriamanitra; fa fanjaka-mpisorona hianareo, firenena masina, olona Azy irery ihany, ary manana andraikitra hitory ny asany lehibe, dia ny asan’izay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga”1. Petera 2,4-5 sy 9 New Geneva Translation).
Ankoatr'izay, ny fotoanantsika rehetra dia mihira sy manamasinana rehefa miaina eo ambanin'ny fanekem-pihavanana Vaovao isika, izay midika fa amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina isika dia mandray anjara amin'ny fanompoana mitohy miaraka amin'i Jesosy. Tsy maninona na miasa ao amin'ny toeram-piasana any amin'ny toeram-piasana isika na manao ny ora malalaka, olom-pirenen'ny lanitra, ny fanjakan'Andriamanitra. Miaina ny fiainana vaovao ao amin'i Kristy isika ary hiaina na hatramin'ny fahafatesantsika na hatramin'ny fiverenan'i Jesosy.
Ry malala, tsy misy intsony ny filaharana taloha. Ao amin'i Kristy dia olom-baovao isika, nantsoan'Andriamanitra ary manana ny Fanahy Masina. Miaraka amin'i Jesosy isika dia eo amin'ny iraka miaina sy hizara ny vaovao tsara. Andao handray anjara amin'ny asan'ny dadanay! Amin'ny alàlan'ny fizarana ny Fanahy Masina ao amin'ny fiainan'i Jesosy dia iray sy mifandray isika.